भिटामिनका चक्की स्वास्थ्यका लागि कति आवश्यक ?
भिटामिनको चक्की, झोल वा सप्लिमेन्ट (क्याल्सियम आदि) ले स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्छ, शरीरलाई बलियो बनाउँछ भन्ने जस्ता भ्रमबाट जतिसक्दो चाँडो मुक्त हुन जरूरी छ ।
जीवलाई जीवित राख्न चाहिने अत्यावश्यक शारीरिक प्रक्रिया हो– मेटाबोलिजम । जीवको मेटाबोलिजमलाई क्रियाशील गराउन सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिन्छ । त्यही अत्यावश्यक पोषक तत्वका लागि चाहिने जैविक तत्व नै भिटामिन हो । सामान्य अर्थमा जीवित वस्तुलाई बाँच्ने र बचाउने आधारभूत तत्व नै भिटामिन हो ।
उमेर ढल्केपछि वा भनौं ५० वर्ष नाघेपछि क्याल्सियम, भिटामिन बी कम्प्लेक्स, भिटामिन बी १२, ओमेगा ३ माछाको तेल, भिटामिन डी आदि खाने चलन बढेको छ तर त्यो खानु आवश्यक नपर्न सक्छ । भरसक भिटामिन र सप्लिमेन्टस् खानाबाट लिने हो। फ्याक्ट्रीमा बनेका, औषधि पसलबाट किन्नुपर्ने चक्कीबाट लिने होइन । यस्ता पोषक तत्व स्वस्थ आहारबाट लिनु चाहिं उत्तम हुन्छ ।
कतिपय मानिस लामो समयदेखि भिटामिन र क्याल्सियमका चक्की आदि ‘डाक्टरले खानु भनेकाले’ खाइरहेको बताउँछन् । हुन पनि हो, डाक्टरहरूले लेखिदिएपछि खानै पर्‍यो । कतिपय अवस्थामा क्याल्सियम खाएपछि हृदयाघात र मस्तिष्कघातसम्म भएका उदाहरण पनि छन् ।
भिटामिन खाने कि नखाने त ?
डाक्टरहरूको पुर्जा हेर्ने हो भने त्यसमा प्रशस्त भिटामिन, क्याल्सियम खान सिफारिश गरेको पाइन्छ । कतिपय अवस्थाहरू छन्, जस्तै भिटामिन सी शरीरमा नपुग्ने अवस्थालाई भिटामिन सी डिफिसियन्सी भनिन्छ । आज त्यो समस्या छैन । खानाबाटै भिटामिन सी प्रशस्त पुगेको अवस्था छ । धेरैजसो अमिलो जातका अमला, सुन्तला, कागती लगायतका फलफूलमा प्रशस्त भिटामिन सी पाइन्छ । पहिले पहिले स्कर्बी लागेर थुुप्रै मान्छे मर्ने गर्थे । शरीरमा भिटामिन सी पुगेन भने स्कर्बी भन्ने रोग लाग्छ ।
यो पनि पढ्नुस्– 'लकडाउन सिन्ड्रोम'- बढ्न थाले हृदयघात, मस्तिष्कघात र आत्महत्या
भिटामिन ए को कमी भयो भने रतन्धो (रातमा आँखा नदेख्ने रोग) हुने सम्भावना हुन्छ । केटाकेटीमा भिटामीन डी को मात्रा पुगेन भने हड्डीको राम्रो विकास हुन पाउँदैन र हड्डी बांगिने, हातखुट्टा बांगिने समस्या
हुनसक्छ । त्यस्तै भिटामिन बी वानको कमी भएमा बेरीबेरी भन्ने नसा सम्बन्धी रोग लाग्न सक्छ ।
भिटामिन बी १२ को कमी भयो भने एनिमिया भन्ने (रगत कम हुने) रोग लाग्छ । यदि भिटामिनको कमी हुने रोग छ भने त्यो अवस्थामा कुनै पनि हालतमा भिटामिन खानै पर्छ । यसका साथै भिटामिनको स्रोत भएका खानेकुुरा पनि खानुपर्छ । रोग कम नहुँदासम्म सप्लिमेन्ट पनि दिनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा भिटामिन र सप्लिमेन्टले फाइदा गर्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ ।
हिजोआज आवश्यक नहुँदा पनि भिटामिन र सप्लिमेन्टहरूको व्यापक प्रयोग भइरहेको छ । आखिर यस्तो किन भएको होला ? कुरा सीधा छ, अहिले औषधिको ठूलो व्यापार छ । विश्वमा सबैभन्दा ठूलो व्यापार हातहतियारपछि औषधिको हो । सबैभन्दा धेरै हतियार अमेरिकाले बेच्छ । विश्वका करीब २०० मध्ये, झण्डै १०० देशलाई अमेरिकाले हतियार बेच्छ । त्यसपछि रूसले । अमेरिकाले चाहन्छ, संसारमा धेरै युद्ध होस् र धेरै हतियार बेचेर फाइदा लिन पाइयोस् । हतियारका व्यापारीकै पकडमा अमेरिकामा राष्ट्रपति चुनिन्छन् । रूसको चाहना पनि त्यस्तै त्यस्तै हो ।
हतियारपछि संसारमा सबैभन्दा बढी व्यापार औषधिको हुन्छ । धेरै बिक्री होस् भन्ने चाहना औषधि उत्पादकले राखेका हुन्छन् । संसारमा १२ खर्ब डलर जतिको औषधिको व्यापार हरेक वर्ष हुन्छ । यो रकम भनेको हाम्रो देशको १०० वर्षको बजेट बराबर हो । त्यसमध्ये अमेरिका एक्लैले यसको ५० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । यति ठूलो व्यापार छ, औषधिको ।
नेपालको कुरा गर्दा वर्षेनि करीब ७० अर्बको औषधि लगायत सर्जिकल सामग्रीको व्यापार हुने गरेको छ । निसन्देह यति ठूलो व्यापारबाट फाइदा लिने औषधि कम्पनीहरूले नै हो । यसको सोझो अर्थ तपाईं हामीले खाएको भिटामिन औषधिले तपाईं हामी होइन, औषधि कम्पनी मोटाइरहेका छन् । यो तथ्य विभिन्न अध्ययनहरूले पुष्टि गरेको छ । हिजोआज धेरैभन्दा धेरै मान्छेले भिटामिन डी र क्याल्सियम खाइरहेको कुरा पछिल्लो अनुसन्धानले देखाएको छ ।
यो पनि पढ्नुस्– सङ्गीतले घटाउँछ मानसिक तनाव
पछिल्लो अध्ययनले भिटामिन डी र क्याल्सियम छुट्टाछुट्टै खाँदा खासै नोक्सान नगर्ला तर दुवै सँगै खाइयो भने त्यसले हानि गर्न सक्छ भन्ने देखाएको छ । भिटामिन डी र क्याल्सियम सँगै खाने १७ प्रतिशतलाई मस्तिष्कघात र हृदयाघात हुने सम्भावना बढाउँछ भन्ने तथ्य पनि अध्ययनले सार्वजनिक गरेको छ । धेरै अध्ययनहरूले देखाएका छन्ः “भिटामिन बी १२, भिटामिन डी, मल्टिभिटामिन, क्याल्सियम, ओमेगा फिस ओइलले, स्वास्थ्यलाई खासै फाइदा गर्दैन बरु आवश्यक नै नभएको अवस्थामा खाइरहेको छ भने त्यसले बेफाइदा गरिरहेको छ ।”
त्यसो भए धेरै मान्छेले भिटामिन र क्याल्सियम किन खाइरहेका छन् त ? सहजै बुझ्न सकिन्छ, यसमा औषधि कम्पनीको ठूलो हात छ । औषधि कम्पनीहरूले औषधि, भिटामिन, क्याल्सियम धेरै प्रयोग गराउन वा बिकाउन विभिन्न अध्ययन गराउँछन् । विभिन्न सामग्री बनाएर प्रचार गराइरहेका हुन्छन् । औषधि कम्पनीहरूले कतिपय एकेडेमिक गाइडलाइनमा समेत यो औषधि खानु फाइदाजनक छ भनेर चिकित्सकबाट समावेश गराउन सफल हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा कुनै सिनियर डाक्टरले सप्लिमेन्टको प्रेस्क्रिप्सन दिने गरेको छ भने जुनियरहरूले पनि त्यसैलाई फलो गर्ने गरेको समेत देखिन्छ ।
कस्तो अवस्थामा भिटामिन खाने ?
तपाईंले कुनै भिटामिनको प्रयोग गर्ने गर्नुभएको छ वा विदेशबाट ल्याएका ठूला ठूला डब्बामा भएका भिटामिन खाने गर्नुभएको छ भने सावधानी अपनाउनुहोला । भिटामिनको कमी छ भन्ने प्रमाणित भएमा, भिटामिनको कमीका कारण स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको अवस्थामा, खानाबाट भिटामिनको पूर्ति हुन नसकेको अवस्थामा भिटामिन वा सप्लिमेन्ट चक्की प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
खाना पच्दैन र पचाउन नसकेकै कारण भिटामिनको अभाव भइरहन्छ भने पनि भिटामिन सप्लिमेन्ट लिन सकिन्छ । स्वस्थ जीवनशैली छ, खानपान राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा भिटामिन वा सप्लिमेन्ट चक्कीले फाइदा गर्दैन । भिटामिनको चक्की, झोल वा सप्लिमेन्ट (क्याल्सियम आदि) ले स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्छ, शरीरलाई बलियो बनाउँछ भन्ने जस्ता भ्रमबाट जतिसक्दो चाँडो मुक्त हुन जरूरी छ ।
यो पनि पढ्नुस्– कफीको नशा